Ogaden News Agency (ONA) – Qaar Kamid Ah Maxaabiistii Ardayda Jaamacadaha Oromia oo Lalaayay.
Qaar Kamid Ah Maxaabiistii Ardayda Jaamacadaha Oromia oo Lalaayay.
Wararka naga soo gaadhaya Gobolka Oromia ayaa sheegaya in ay ciidamada wayaanuhu laayeen qaar kamid ah ardaydii ay xabsiyada dhigeen horaantii todobaadkan kuwaas oo ay ka uruuriyeen jaamacadihii ay dhigan jireen.
Sida xogtu nagu soogaadhay waxaa jidh dil loogaystay ugeeriyooday qaar kamid ah ardaydii ay ciidanka gumaysigu xidh xidheen kuwaas oo ay ku eedeeyeen in ay kadambeeyeen weeraro lagu qaaday saraakiil ka tirsan wayaanaha.
Shacabka ree Oromia oo ogaaday in qaar ardaydii kamid ah la laayay ayaa isku dayay in ay xabsiga tagaan si ay u aasaan ardayda dhimatay waxaana lagu wargaliyay in aysan dhaqi karin maydadka ardayda isla markaana aysan kutukan karin sidoodana ay ku aasaan maydadka ardayda.
Dadkii shacabka ahaa ee goobta tagay ayaa kabiyo diiday sida ay ciidanka gumaysigu u hadlayaan waxayna diideen in ay iska aasaan ardayda dhimatay oo ahaa dad muslimiin ah.
Dadka shacabka ah ee goobta ay maydadku yaalaan tagay ayaa niyad jab kaqaaday hadalkii saraakiisha gumaysiga kaas oo arday ay iyagu laayeen hadana ay dhaheen waa in loo aaso sida aan anagu rabno waxayna dadwaynuhu ku hormudaharaadeen xabsiga hortiisa.
Saraakiisha ciidanka amaanka ayaa sheegay in ay ardaydu iska dhinteen kadib markay iyagu islaayeen mana jiro arday ay ciidanku laayeen ayay dhaheen waana erayada ay shacabka aad uga xumaadeen.
Kacdoonada Gobolka Oromia kajira ayaa cirka isku sii shareeraya waxaana siibadanaya nacaybka ay shacabku uqabaan kooxda TPLF iyo kuwa daba qoodhiga ah ee lashaqeeye waxayna shacabka Oromadu balan qaadeen ay siiwadi doonaan kacdoonkooda.